Saafi Films - News: Maxaad ka taqaanaa Ra�isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Saacid Faarax �Taariikh Kooban�
Maxaad ka taqaanaa Ra�isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Saacid Faarax �Taariikh Kooban�
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa Goordhow magacaabbay Ra�isul Wasaaraha mudada laga sugayay isagoo xilkaas udoortay C/qaadir Faarax Garaad oo ku magac dheer (Saacid ).
Ra�isul Wasaaraha cusub ayaa waxaa uu ku dhashay duleedka Magaaladda Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana uu ka soo jeedaa beesha Sade �Mareexaan� , reer Diini, ( reer dalal), waxayna qoys ahaan aad isu dhowyihiin R/wasaarihii hore Maxamed C/laahi Farmaaj.
Waxaa udhaxda Mid kamid ah Xildhibaanada Barlamaanka Soomaaliya waana Caasha Xaaji Cilmi oo kasoo jeeda beelaha Hawiye gaar ahaan Habar Gidir.
Saacid Faarax Garaad, wuxuu 21kii sano ee lasoo dhaafey daganaa magalaada Nairobi halkaas oo uu ku lahaa ganacsi balaaran, isagoo sidoo kalena maamuli jirey NGO la magac baxay Saacid oo qandaraasyo ka qaadan jirey xafiisyada hay�adaha UNka ee fadhigoodu yahay Nairobi.
Waxaa uu dhawaan Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya uu kaga dhawaaqay Urur ama xisbi lagu magacaabo Rajo, iyadoona uu marar badan kahadlay Xaaladda Soomaaliya.
4,542,703 unique visits